Safal Khabar - रवि प्रकरण : ५ दिन म्याद आज सकियो, अब के हुन्छ? यस्तो छ कानुनी प्रक्रिया
रवि प्रकरण : ५ दिन म्याद आज सकियो, अब के हुन्छ? यस्तो छ कानुनी प्रक्रिया
मङ्गलबार, ०३ भदौ २०७६, १२ : ३४
आज के होला?
आरोपीहरुको बयान पनि सुरु भएको छ। हिजोदेखि बल्ल बयान सुरु भएको र नसकिएको हुनाले अनुसन्धान सकिएर मुद्दा बुझाउने अवस्था देखिँदैन। त्यसको अर्थ हो आज अदालतले फेरि केही दिनका लागि थुनामा राख्न म्याद थप गर्ने सम्भावना प्रवल छ।
त्यसको अर्थ रवि लामिछानेले अझै केही दिन थुनामै बस्नु पर्ने स्थिति आउँछ।
कति दिन? त्यो भने अदालतले निर्णय गर्छ।
तेस्रो स्थिति भयो भने चाहिँ अभियुक्त अहिले जस्तो प्रहरी कार्यालयको थुनामा हैन, जेलमा नै जान्छन्। (माइसंसार डट कमबाट)